လူမှုမီဒီယာတွင်ဖြစ်ရပ်မြှင့်တင်ရန်သော့ချက် ၆ ခု Martech Zone
ငါတို့ကိုယ်ပိုင်ပြီးနောက် Indianapolis အတွက်ရန်ပုံငွေရှာပွဲတော်, ငါရုံရှိမထင်ခဲ့ဘူးကြောင်းရေးသားခဲ့သည် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ထက်စျေးကွက်အပေါ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအဖြစ်အပျက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်း။ အဆိုအရ အများဆုံး, ငါမှန်တယ်!
အဲဒါကိုချစ်ရင်မုန်းတီးလိုက်ရအောင်ဆိုရှယ်မီဒီယာဟာဒီနေရာမှာဆက်ရှိနေဖို့နဲ့ငါတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘ ၀ မှာအခန်းကဏ္playingကိုတိုးမြှင့်ပေးနေတာကိုသိနေပြီ။ တစ် ဦး ချင်းအနေနှင့်သာမကစီးပွားရေး၏သေးငယ်ပြီးကြီးမားသောစီးပွားရေးလမ်းကြောင်းသည်များပြားလာသောလူမှုရေးလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူဖောက်သည်အသစ်များထံရောက်ရှိခြင်းအတွက်အားသာချက်များစွာရှိသည်။ အကယ်၍ သင်ဖြစ်ရပ်များတွင်အလုပ်လုပ်နေလျှင်သို့မဟုတ်မည်သည့်လမ်းကြောင်းများကိုအာရုံစိုက်သင့်သနည်း။ ဘယ်နှစ်ခါတင်သင့်သလဲ။ ပရိသတ်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဘာပြောသင့်သလဲ။
အမြင်အာရုံ countdown ဖန်တီးပါ။
လူမှုမီဒီယာ Celebrity ကိုဖိတ်ပါ။
ဖြစ်ရပ်အတွက်ထူးခြားသော hashtag ကိုဖန်တီးပါ။
သင်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုတင်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်နေသောအချိန်တွင်သင်လုံးဝရွှံ့နွံဖြစ်သွားသည်ဟုကျွန်ုပ်ထပ်ပြောပါရစေ။ ပွဲစဉ်နှင့်ပတ်သက်သောဓါတ်ပုံများကိုတိုက်ရိုက်တင်ပို့ခြင်းနှင့်တင်ခြင်းလုပ်သောအဖွဲ့ရှိကြောင်းသေချာစေပါ။ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ၌ပျော်စရာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ၌ကြုံတွေ့နေကြရသည့်တိုင်လူအများအပြားက ဆက်လက်၍ ဖြစ်ပျက်နေဆဲဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မပြီးဆုံးသေးပါကသင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမဲပေးသူရရှိလိမ့်မည်။
Tags: ဘလော့ဂါအဖြစ်အပျက်မြှင့်တင်ရေးဖျော်ဖြေပွဲမြှင့်တင်ရေးညီလာခံမြှင့်တင်ရေးကော်ပိုရိတ်ဖြစ်ရပ်မြှင့်တင်ရေးအဖြစ်အပျက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြစ်ရပ်မြှင့်တင်ရေးFacebook ဖြစ်ရပ်မြှင့်တင်ရေးပွဲတော်မြှင့်တင်ရေးအဖြစ်အပျက်ဆောင်ကိုထုတ်ပေးသည်ဂူဂဲလ် + အဖြစ်အပျက်မြှင့်တင်ရေးအဖြစ်အပျက်အသိအမြင်တိုးမြှင့်အဖြစ်အပျက်သစ္စာရှိမှုတိုးမြှင့်လက်မှတ်အရောင်းတိုးမြှင့်လိပ်စာဖြစ်ရပ်မြှင့်တင်ရေးnetworking ဖြစ်ရပ်မြှင့်တင်ရေးpinterest ဖြစ်ရပ်မြှင့်တင်ရေးပုဂ္ဂလိကအဖြစ်အပျက်မြှင့်တင်ရေးအဖြစ်အပျက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြစ်ရပ်ဖြုန်းကိုလျှော့ချနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမြှင့်တင်ရေးလူမှုမီဒီယာဖြစ်ရပ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလူမှုမီဒီယာဖြစ်ရပ်မြှင့်တင်ရေးဆိုရှယ်မီဒီယာဖြစ်ရပ်များကုန်စည်ပြပွဲမြှင့်တင်ရေးသင်တန်းသင်တန်းမြှင့်တင်ရေးtwitter ဖြစ်ရပ်မြှင့်တင်ရေးyoutube ဖြစ်ရပ်မြှင့်တင်ရေး
နည်းပညာ၏တိုက်စားမှု, ပေါက်ကွဲမှုနှင့် meandering သက်ရောက်မှု
မေလ 25, 2015 မှာ 2: 15 pm တွင်
Dooby Dooby Do. ငါဒီဟာရပ်တည်ချက်ဟာဘလော့ဂ်အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်မှုအရှိဆုံးတစ်ခုလို့ယုံကြည်တယ်။ ငါမင်းမျှော်လင့်ထားတဲ့ Leukemia Society ရဲ့ shindigs နှစ်ခုထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုကြည့်ရင်းမင်းရဲ့အကြံအစည်အချို့ကိုမျှဝေမယ်။ ယခုငါဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ ဦး နှောက်ကိုရွေးရန်သင့်အားကော်ဖီထိုင်ရန်မလိုတော့ပါ။ ကောင်းသောပစ္စည်း!
မေလ 27, 2015 မှာ 1: 26 pm တွင်
ဟေ့ Duke! ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာပွဲကောင်းဈေးကွက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ထိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးလူတော့မဟုတ်ပါဘူး။